Ukraine waxay rabtaa in ay kordhiso mugga waxsoosaarka beeraha ee suuqyada Midowga Yurub
Ukraine waxay dooneysaa in ay ballaariso helitaanka alaabooyinka dhulka si ay u helaan suuqyada Midowga Yurub, oo ay weheliyaan ballaarinta sooyada dhoofinta caanaha iyo xoolaha. Taras Kutovoy, Wasiirka Beeraha iyo Cuntada Ukraine, ayaa la kulmay Wakiilka Midowga Yurub ee Caafimaadka iyo Badbaadada Vytenis Andriukaytis, oo uu ka hadlay qorshaha Ukraine iyo kooraska fulintooda.
Ukraine ayaa baasto u dhoofisa dalal badan oo Yurub ah, taas oo 69% ka dhoofisa dhoofinta. Bisha Janaayo-Nofeembar 2016 ee Midowga Yurub, badeecadani waxaa lagu bixiyay $ 17,600,000, taas oo 4.2 jeer ka badan wakhtiga la midka ah ee 2010 ($ 4,200,000). Mid ka mid ah waddamada ugu horreeya ee soo dejinta wax soo saarka EU-da sannadka 2016 wuxuu ahaa Germany, taasoo ka dhigtay 13.6% dhammaan badeecooyinka la isku qurxiyo, booska labaad waxaa qaaday England, taasoo hoos u dhacday 12.6%, kaalinta saddexaadna waxaa qaaday Spain, taasoo iibsatay isla qiyaasta isla sida England - 12.3%.
Sida ku cad macluumaadka NASU "Ukrtsukor", sicirka iibka iibka bilaha koowaad ee sanadkan wuxuu kordhay celcelis ahaan 5.5% waxaana uu hadda u dhexeeyaa 14.10-14.50 UAH / kg. Sida laga soo xigtay madaxa qaybta falanqaynta Ruushka Ruslana Butylo, xaaladdan waxaa caddaynaya kororka sicirrada suuqa adduunka: "Muddadii udhaxeysay 29kii Disembar, 2016, qiimaha sonkorta ee London Stock Exchange wuxuu kordhay 4% ($ 20.1 $ / t), iyo caano lo'da ee New York Stock Exchange ayaa kordhay 6% ($ 25.3 / t), "ayay tidhi.
Wax soo saarka saliidda gabbaldayaha ee Ukraine ayaa kordhay 20%
Maanta, Ukraine qaadataa meesha mid ka mid ah kuwa dhoofiyayaasha ugu weyn ee saliidda gabbaldayaha. Sida laga soo xigtay ururka "Ukrolyaprom", sannadkii 2016, Ukraine ayaa soo saartay 4,800,000 tan oo badeecado ah, taas oo 23% ka badan intii ka horreysay sannadka 2015 iyo rikoodh dhammaystiran oo dalka ah. Wadarta dhoofinta ayaa ka dhigtay wax ka badan tan sanadkii hore (48 bilyan oo doolar).
Sawirka ugu dambeeya ee dayax-gacmeedka ilaa Ukraine wuxuu muujinayaa in barafka hareeraha uu haatan ka kooban yahay bartamaha bartamaha iyo koonfurta. Sawirka dayax-gacmeedka ugu dambeeya maahan mid gebi ahaanba aan daruuri ahayn, sidaas darteed way adagtahay in la arko sawir buuxa oo ku saabsan sida kalluunka u faafo. Heerkulka labadii maalmood ee la soo dhaafay wuxuu ahaa mid ciriiri ah, laakiin saadaashu waxay muujinayaan baraf yar iyo heerkulku heerkul ilaa -22 ° C ilaa habeenkii Khamiista.
Sanadkii la soo dhaafay, Ukraine soo saaray casiir yar
Sida laga soo xigtay Adeegga Tirakoobka Qaranka, sannadka 2016, shirkadaha Yukreeniyaanku waxay yareeyeen soosaarka miraha iyo khudaarta cagaaran marka la barbardhigo 2015 ilaa 8.1% ilaa 232 kun tan. Inkastoo xaqiiqda ah Bishii December 2016, 19,3 kun tan oo casiir ah ayaa la soo saaray, taasoo ah 0.4% ka badan bishii Disembar 2015, Bishii 11aad ee sannadkii hore waxaa soo saaray 9.5% wax ka yar.
Dhammaan kuwa doonaya khabiiro ku takhasusay Ukraine, Safaarada Israel waxay fursad u siinaysaa in ay tagaan koorsooyinka ayna helaan deeq waxbarasho, oo loogu yeero MASHAV, si loogu tababaro barnaamijyada tababarka xirfadaha, kuwaas oo leh tilmaamaha soo socda: Maaraynta deegaanka; horumarinta miyiga; beeraha; horumarinta bulshada; horumarinta nidaamyada waxbarashada; iyo kuwa kale.
Transcarpathian wineries waxay ka heli kartaa maalgashiga Hungary
Haddii Ukraine ay u ogolaato maalgashadayaasha in ay kiraystaan ​​dhulka iyo shirkadaha, maalgashadayaasha Hungary waxay ku hawlan yihiin dib u soo celinta khamriga Bobovischsky ee Transcarpathia, oo loo yaqaano tayada wax soo saarka, khamriga caanka ah ee ka baxsan dalka. Wadashaqayntu, ganacsatadu waa inay helaan dammaanad qaadista dhammaan qodobada lagama maarmaanka ah ee ka imanaya dhinaca Yukreeniyaan.
Waxyaabaha dabiiciga ah ee Ukraine ee 5tii sano ee la soo dhaafay korodhay 90%
Taras Kutovoy, Wasiirka Beeraha iyo Cuntada Ukraine, furitaanka shirweynihii ugu horreeyay ee caalamiga ah "Organic ee Ukraine 2017. Horumarinta Suuqa Beeraha ee Ukraine - laga bilaabo soosaarka ilaa iibka", ayaa sheegay in tirada warshadaha soo saara waxsoosaadka organic ay kor u kaceen 90%, noqdaan mid ka mid ah warshadaha firfircoon.
Soosaarayaasha hilibku waxay ahayd inay "noolaadaan" sannadkii hore
Sida laga soo xigtay khabiirka FAO, Andrei Pankratov, sannadkii la soo dhaafay, soo saarayaasha hilibka Ukraine ayaa la kulmay dhibaatooyin badan oo la xidhiidha kororka qiimaha badarka ee noocyada kala duwan ee hilibka sababtoo ah hryvnia raqiis ah, iyada oo qiimaha doolarka ee doollar muujin waayeen rajo cusub. Kharashka hilibka lo'da, marka la barbardhigo noocyada kale ee hilibka, ma aha wax soosaaraya soo saarayaasha.
Wasiirka Beeraha Ukraine ayaa soo jeediyay soo celinta waraabka
Wasiirka Beeraha Ukraine, Taras Kutovoy, ayaa ka qayb-galay shirkii Forum-ta Global Forum for Food and Agriculture in Berlin toddobaadkii hore, halkaas oo uu soo kiciyay soo jeedinta Ukraine weligeed ah, si loo kordhiyo soosaarka miraha, waa lagama maarmaan in la soo celiyo nidaamka hore ee waraabka waraabka ee Soves.
Bishii Febraayo, kororka qiimaha caanaha ayaa la filayaa
Sida laga soo xigtay Agaasimaha Waaxda Hantidhowrka ee Nidaamyada Kalluunka, Aleksey Doroshenko, dhamaadkii February, kororka qiimaha raashinka caanaha ee Uk ayaa kordhin doona 3%. "Maanta, waxan arkeynaa" sicirrada "qiimaha caanaha laga dhoofiyo Cuntooyinka dhirta ayaa isku dayaya in ay yareeyaan qiimaha iibsiga caanaha, taas oo ay ugu wacan tahay, in la joojiyo sicirka qiimaha caanaha ee Ukraine, si kastaba ha noqotee, beeraha si kastoo looga hortago dadaalkaas.
Ukraine iyo Guddiga Yurub ayaa gaaray heshiis ku saabsan dib-u-soo-celinta ee dhoofinta digaagga Ukraine ee dalalka EU. Sida laga soo xigtay war-saxaafadeedka Wasaaradda Beeraha iyo Warshadaha, hilibka digaaga maanta waxaa la siiyaa suuqa Yurub. "Arrinta gobolaynta waa mid ka mid ah kuwa ugu xasaasiga badan ee xiriirka la leh Guddiga Yurub.
Maraykanka ayaa diyaar u ah inuu la xaajoodo sahayda siriyalka organic ee ka soo baxda Ukraine, sida uu sheegay Wasiirka Ukraine ee siyaasadda beeraha iyo cuntada. Intii uu socday wareysiga telefishanka, wasiirku wuxuu sheegay in cunada Maraykanka ay si adag u xakameyneyso, waana ay adagtahay in suuq geli la soo saaro alaab cusub, laakiin Maraykanku wuxuu diyaar u yahay in uu la xaajoodo sarreenka organic.
Ukraine waxay hagaajisay heerkeeda musuqmaasuqa
Transparency International - oo ah urur caalami ah oo caalami ah oo la dagaallanka musuqmaasuqa iyo baaritaanka heerka musuq-maasuqa aduunka oo dhan, ayaa soo saaray liiska sannadlaha ah ee musuq-maasuqa, kaas oo Ukraine uu dhaliyay 29 ka mid ah 100 dhibcood. Warka wanaagsan ayaa ah in horumarinta laba-dhibcood ee sannadkii hore, taas oo muujinaysa dib-u-habeeynta musuqmaasuqa ee Ukraine ay hirgelisay, saameyn gaar ah leh.
Qiimaha wax-soo-saarka dalaggu wuxuu kordhay 10.6%, iyo wax soo saarka xoolaha - 20.9%. Sida laga soo xigtay qiyaasaha adeegga tirakoobka ee degmooyinka, qiimaha wax soosaarka beeraha ee sannadka 2016 wuxuu kor u kacay 13.5% marka la barbardhigo 2015. Gaar ahaan, kharashyada wadajirka ah ee soo saarka beeraha ayaa kordhay 10.6%, iyo wax soo saarka xoolaha - 20.9%.
Machadka Daraasada Market Research for Agricultural Market (ICAR) ayaa sheegay in qaboojinta laga filayo laga bilaabo Jannaayo 27 illaa 4-tii Febraayo, waxana uu halis ku yahay sarreenka xilliga qaboobaha ee meelaha qaarkood ee gobollada koonfurta ee Rostov iyo Krasnodar ee Russia. Sida laga soo xigtay madaxa IKAR Dmitry Rylko, heerkulka ayaa la filayaa inuu ku dhaco gobolka Rostov iyo gobolka Krasnodar illaa -17 ° C, halkaa oo aan hadda la ilaalin karin barafka.
Kharashka baradho ee Ukraine ayaa si degdeg ah u kordhin doona
Horeba bishan, waa in aan ka filanno kororka sicirka ee khudaarta "borsch set". Kuwaasina, qiimaha ugu sarreeya wuxuu u kici doonaa baradho iyo basasha. "Dhammaan baradhadu waxay ku dhacdaa cudurka, waa la jaraa, waxaad arki kartaa dhibco mugdi ah," ayuu yidhi beeraley ka soo jeeda Nikolaev. "Khudradu waxay bilaabeen inay si ba'an u kallifaan, dalaggu wuu sii xumaadaa, beeralayda ayaa lumiya dakhligooda, sidaas darteed qiimaha baradhadu si dhakhso ah ayuu u kordhay.